at 4/22/2014 Labels: Muslim From Myanmar , အတ္ထုပ္ပတ္တိ , မောင်သန်းဝင်း(ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်)
ပထမ ဗမာမွတ်စလင်များ (First Burmese Muslim)
M-Media မှ တဆင့် ကူးယူဖော်ပြသည်။
ရေးသားပြုစုသူ ဒေါက်တာသန်းဝင်း (မောင်သန်းဝင်း- ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်) B.A.(Honours), M.A., H.G.P., Ph.D.
၁)အမျိုးသားကောလိပ် ပထမဆုံးဝိဇ္ဖာရရှိခဲသည့်
အာဇာနည်ခေါင်း ဆောင်ကြီး ဆရာကြီး ဦး ရာဇတ်(၂၀ ဇနန် ဝါရီ၁၈၉၈- ၁၉ ဇူလိုင် ၁၉၄၇)
၂)တက္ကသိုလ်သုံး ဝေါဟာရများကို ပထမဆုံးမြန်မာပြန်ဆိုသူများအနက် ပါဝင်ခဲ့သူ
ပါဠိပါမောက္ခ ဆရာကြီး အဟ်မဒ်ကာစင်မ် (B.A., B.Es.)
၃)ကျန်းမာရေးမှူးသင်တန်းကျောင်း စတင်တည်ထောင်သူများအနက် တစ်ဦးအပါအဝင်ဖြစ်သူ
ဆရာဝန်ကြီး ဝဏ္ဏကျော်ထင် ဒေါက်တာဦးဘခက် (ဆမ-၃၅) (၂၉ မေ ၁၉၀၈–၂၂ ဇန်နဝါရီ ၂၀ဝ၄ )
၄)ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တွင် ကုန်ထုတ်ဓာတုဗေဒဌာန ပေါ်ပေါက်လာအောင် ဦးဆောင် ကြိုးပမ်းခဲ့သူ
ပါမေက္ခ ဦးအောင်ခင် (၂၁ ဧပြီ ၁၉၁၈- ၈ မေ ၁၉၁၇ )
၅)ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် ပထမဦးဆုံး ပါမောက္ခချုပ်
ဦးဘရှင်(သံတွဲ) ဘီအက်စ်စီ အထက်အတန်း
၇)ရန်ကုန်တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားသမဂ္ဂ(တ-က-သ) ပထမဆုံးဥက္ကဋ္ဌ
၈)ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားများ သမဂ္ဂ (ဗ-က-သ)ပထမဆုံး ဥက္ကဋ္ဌ
အငြိမ်းစားသံအမတ်ကြီး မဟာသရေစည်သူ ဦးဖေခင် (နိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည်ပထမဆင့်) (၂၇ ဩဂုတ် ၁၉၁၂ – ၂၅ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ဝ၄)
စာပေ၊ အနုပညာ၊ ဗိသုကာ
၁၀) မြန်မာစာပေနယ်တွင် အစောဆုံး ခရီးသွားမှတ်တမ်း
စာဆိုတော် ရွှေတောင်သာဂသူ ဦးနု၏ ဘင်္ဂလားသွားမှတ်တမ်း
၁၁)ပထမဆုံး ကာတွန်းဆရာကြီးနှင့် ဦးရွှေရိုးအက တီထွင်သူ
၁၂) မြန်မာစာပေလောက၌ ခေတ်မီစာအုပ်ထုတ်လုပ်မှုကို အစောဆုံးစတင်သူ
ပဉ္စရူပံ ဦးခ (၁၈၈၅-၁၉၆၀)
၁၃) အစောဆုံး စစ်မှတ်တမ်း ဘာသာပြန် စာအုပ်
တက္ကသိုလ် နန္ဒမိတ်၏ မြန်မာပြည် စစ်မြေပြင် (၁၉၆၅)
၁၄)အမျိုးသား စာပေဆု ပထမဆုံး ပြဇာတ်စာပေဆုရသူ
စာရေးဆရာ တက္ကသိုလ် မောင်မောင်ခင်
၁၅) ပထမဆုံး ကျားကစားနည်း စာအုပ်ရေးသူ
စာရေးဆရာ ချစ်ညို (၂၄ ဒီဇင်ဘာ ၁၉၂၄-၁၀ မေ ၁၉၈၇)
၁၆) ပထမဆုံး မြင်ကွင်းကျယ် ရုပ်ရှင်ကားမှ ရုပ်ရှင်မင်းသား
မင်းသား၊ ဒါရိုက်တာ၊ ဗိုလ်ကြီး ဒေါက်တာ မောင်မောင်တာ(ဟဂ်ျ) [Ph.d., M.A., FDMU (Dublin),DJ (Ygn)]
၁၇)မြန်မာ့ အရှည်ဆုံး အကြီးဆုံး သစ်သား တံတား
လူ မှု ရေး
၁၈) လူမှုထူးချွန်ပထမဆင့် ကို ပထမဆုံးရရှိသူ အမျိုးသမီး
ဟာဂျီမ ပျဉ်း မနားဒေါ်ပု (၁၉၀၆-၁ ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၈၂)
၁၉)မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံး သကြားစက်
ပထမ ဗမာမွတ်စလင်များဟူသည် မြန်မာပြည်၏ ကြီးပွားတိုးတက်မှုအတွက် မိမိတို့ရပ်တည်ရာ နယ်ပယ်အသီးသီး တွင် ပထမဦးဆုံး စတင်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည့် မြန်မာပြည်ဖွားပြည်ထောင်စုသား အစ္စလာမ် သာသနာဝင်များကိုရည်ညွှန်းလိုခြင်းဖြစ်သည်။ Pioneer ခေါ် စွန့်ဦး ဆောင်ရွက်ကြသူဟုလည်း ဆိုနိုင်သည်။ စာပေ၊ အနုပညာ၊ ဗိသုကာ၊ ပညာရေး၊ တိုင်းပြည်ပြုရေး၊ လူမှုရေး၊ စီးပွားရေုးတို့တွင် လမ်းသစ်ထွင်ကာ ဦးဆောင်မှုပေးခဲ့သော ထူးချွန်ထင်ရှားသူများ ဖြစ်ကြပါသည်။
ထိုသူများ၏ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုများကို လူငယ်တုိ့ အားကျအတုယူကာ မိမိတို့သည်လည်း မြန်မာနိုင်ငံနှင့် လူမျိုး အကျိုးကို သယ်ပိုးလိုစိတ်ရင့်သန်စေရန်၊ မွတ်စလင်ဖြစ်သည်နှင့်အညီ လူသားထုအတွက် အကျိုးပြုသော ပုဂ္ဂိုလ်ထူး ပုဂ္ဂိုလ်မွန်များ ဖြစ်ကြစေရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။
ကမ္ဘာသမိုင်းကို လေ့လာကြည့်သည့် အခါ မွတ်စလင်တို့သည် ကမ္ဘာ့ လူသားထုအား အများဆုံး အကျိုးပြုခဲ့သည်။ ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ကျရောက်ပြီးနောက် မွတ်စလင်တို့သည် ဂရိ၊ ရောမ၊ အိန္ဒိယ၊ တရုတ်တို့၏ စာပေယဉ်ကျေးမှုများကို စုဆောင်းထိန်းသိမ်းခဲ့ကြသည်။ ပညာရပ်အသစ်များကို သုတေသနပြုပြီး တီထွင်ခဲ့ကြသည်။ ခေတ်အဆက်ဆက်တွင် အနောက်တိုင်းသား များစွာတို့သည် အတိတ်ခေတ် မွတ်စလင်တို့၏ ကမ္ဘာကို အကျိုးပြုပုံအား ဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးစားကြသည။်
” ၅ ရာစုတွင် ရောမအင်ပါယာ ကစင့်ကလျားပြိုကွဲသွားပြီးနောက် ဥရောပတွင် အမှောင်ကျနေခိုက် ခေါမ လူ့အစည်းအရုံးအပါအဝင် လူ့အနွယ်အဝင်များ တစ်ဆက်ပြီး တစ်ဆက် နှင့် တစ်ခုပြီး တစ်ခု ထမ်းပိုး ထူထောင်ခြင်းပြုခဲ့ကြသော စာပေ အနုပညာနှင့် သဘာဝသိပ္ပံပညာရပ်များဆိုင်ရာ အရပ်ရပ်ယဉ်ကျေးမှုများကို ကောင်းစွာဆက်ခံထိန်းသိမ်းခြင်း ပြုခဲ့ကြရုံမျှ မက အံ့ဩလေးစားဖွယ်ရာ တိုးချဲ့ခဲ့ကြသူများမှာ အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သော အာရပ်လူ့အစည်းအရုံးဖြစ်၏။
သို့ရာတွင် ဥရောပ သမိုင်းဆရာ အများအပြားပင် ယင်းအချက်ကို ဖုံးကွယ်ထားလေ့ရှိကြ၏။ ကိုလိုနီဝါဒနှင့် လူမျိုးရေးဝါဒများ လွှမ်းမိုးခြင်းခံရသူများ ဖြစ်သည့် အလျောက် လူ့သမိုင်း၏ အထင်ကရ မှတ်တိုင်ကြီးများကို မကြည့်နိုင် မမြင်နိုင် ကြခြင်း ဖြစ်တန်ရာ၏။ [ စာရေးဆရာ ဗန်မော်တင်အောင်၏ သဘာဝသိပ္ပံစာအုပ်။ (၁၉၇၄)။ စာ ၁၈၅-၁၈၆။ အခန်း (၈) ဥရောပ အမှောင်ခေတ်နှင့် အာရပ်ယဉ်ကျေးမှု] အာရပ်တို့သည် ဂဏန်းသင်္ချာ၊ နက္ခတ်ဗေဒနှင့် ဆေးပညာများ တတ်မြောက်ကြ၏။ ဗိသုကာအတတ်တွင်လည်း လက်ရာမြောက်ကြ၏။ အရောင်အမျိုးမျိုး အသုံးချနည်းကိုလည်း အာရပ်တို့ ကျွမ်းကျင်ကြ၏။ သကြားနှင့် စက္ကူလုပ်သော အတတ်ကို တရုတ်ပြည်မှယူ၍ အနောက်နိုင်ငံသို့ အာရပ်တို့ကပင် တင်သွင်းခဲ့ကြ၏။
ယခုအခါ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်တွင် အသုံးပြုလျက်ရှိသော အယ်လ်ဂျီဘရာ Algebra (အာရပ် Al-jebr မှရသည်) မဂ္ဂဇင်းMagazine (အာရပ်ဘာသာ Magacen မှရသည်) စသည့် ဝေါဟာရများနှင့် 1,2,3 စသည့် ဂဏန်း အရေးသားများသည် အာရပ်တို့၏ အမွေများပင်ဖြစ်သည်။
အစ္စလာမ်သာသနာထွန်းကားသော မြို့များတွင် တက္ကသိုလ်နှင့် စာကြည့်တိုက်များကို အာရပ်တို့က တခမ်းတနား ဖွင့်လှစ်ခဲ့၏။ ဥရောပတိုက်မှ ကျောင်းသားအမြောက်အမြားပင် ထိုတက္ကသိုလ်များတွင် လာရောက် ဆည်းပူးကြသည်။ ထို့ပြင် လှပဆန်းကြယ်သော ဗလီများကို အာရပ်တို့ ကြီးစိုးရာဒေသတိုင်းတွင် တွေ့မြင်ရသည်။ စပိန်ပြည်မှ ကော်ဒိုဗား Cordoba) ဗလီ သည် စံတင်အောင် လက်ရာမြောက်သော ကမ္ဘာကျော်အဆောက်အဦးဖြစ်သည်။ အာရပ်စာဆိုတို့ ရေးသားခဲ့ကြသည့် အာရေဘီယံနိုက် (Arabian Nights))ပုံပြင်များသည်လည်း ကမ္ဘာကျော်စာပေတွင် ယနေ့တိုင် ထင်ရှားကျန်ရစ် ခဲ့၏။
Download Link များ
အစ္စလာမ့် လူ့အဖွဲအစည်းသမိုင်း (၁+၂) (ပြုစုသူ-ဂျာဝဒ်သန်း)